Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki 17 uMasingane 2017 » SciBraai
Sibusiso Biyela / January 17, 2017
Insangu nokusetshenziswa ukwelapha
Umnyango wezeMpilo usuqalile nezinhlelo ezingenza ukuthi insangu icwaningwe ososayensi baseNingizimu Afrika ukuze kuzotholakala amakhemikhali angelapha izifo eziningi. Okwamanje ososayensi abakakwazi ukuthola ukuthi yini engenza insangu ibe ngcono ekulapheni izifo okufana nezinhlungu kanye nomdlavuza.
Lokhu kutholakale kucwaningo olwenziwe ososayensi abase Harvard University. Lolucwaningo lulandela olunye olusho okufanayo elakhishwa ososayensi base University of Bristol.
Abantu bancamela ukuqamba amanga kumaphoyisa
Ucwaningo olwenziwe u Dkt. Sazelo Mkhize esebenzisana no Dkt. Jéan Steyn lutshengisa ukuthi abantu bakhetha ukuqamba amanga uma bekhuluma namaphoyisa. Abacwaningi bakuthole lokhu emva kokuba becwaninge amaphoyisa anesipiliyoni esidlula imiyanga eyishumi.
Nogokusho kwalamaphoyisa omthetho, iningi lawo asuka esifundazweni seKwaZulu-Natal, batshengise ukuthi abantu abaningi ngaphezu kokuqamba amanga banokuthi babe ngamasela uma becabanga ukuthi angeke bebanjwe.
Abacwaningi bayavuma kodwa ukuthi kusakuningi ukucwanginga okudinga ukwenziwa ukuze iqiniso lizobonakala kahle nokuthi amaphoyisa asebenza kanjani.
Kutholakale isitho somzimba esisha
Izitho zomzimba zinamagama azo esintu njengoba zinamagama esilungu. Ososayensi base University of Limerick sebethole abacabanga ukuthi isitho somzimba esingakaze zibhalwe njengesitho somzimba esizimele.
Lesisitho esisha sitholakala kuwo wonke umuntu ngasemathunjeni. Ngokusho kwalaba ososayensi lesisitho abasibiza nge-mesentery sisaskhumba esibamba amathumbu emzimbeni siphinde sihambise umsoco kuwo.
January 17, 2017 in #ShisaSayensi. Tags: isiZulu, marijuana, medical marijuana, mesentery, science, south Africa, zulu, Zulu science
← Every drop counts: watching water from space
Toxic fungi: what’s in your food? →